सिम्स मा पछिल्ला किस्ताबाट सुविधाहरू हटाउन जारी राख्नुहोस् | ग्याजेट समाचार
यो हिजो थियो जब हामीले एउटा सानो राय टुक्रा प्रकाशित गरेका थियौं सिम्स। र फ्रान्चाइजी को तेस्रो किस्ता पछि years बर्ष भन्दा बढी पुगेको बावजूद ताजा र नवीनता को भावना को अभाव। र यो पछिल्लो रात थियो (प्रायद्वीप समय) कि पछि ईए र मैक्सिस उनीहरू ट्विचमा स्ट्रिमिंगको माध्यमबाट प्रसारण गर्दछ जुन खेलको केहि घण्टा शीर्षकको बारेमा निश्चित समाचार देखाउँदै र खेलका प्रयोगकर्ताहरू र दर्शकहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै। यो जान्न उत्सुकतापूर्ण थियो कि ती दुई घण्टाको विशाल अंश नयाँ निर्माण मोडमा कसरी खर्च भयो शीर्षकको बाँकी फिल्डहरूमा जानुविना, हो।
अब एउटा चेकले एउटा डम्बाउन्ड भयो अस्सी भन्दा बढी वस्तुहरूको आधिकारिक सूची र सुविधाहरू हटाइयो वा गतपूर्व किश्तबाट अत्यन्तै कम गरियो सिम्सबाट। यो सूची वेबसाईटहरू, ब्लगहरू र The सिम्स सम्बन्धित फोरमहरूको विशाल रकम द्वारा संकलित गरिएको छ, टोली कथन, भिडियो वा डेमोमा भएता पनि यी मेटाउनेहरू र अनुपस्थितिहरूको प्रमाणहरू र पुष्टिहरू सुनिश्चित गर्न सुनिश्चित गर्दै। जम्प पछि तपाईंले सम्पूर्ण सूची अनुवाद गरिएको पाउनुहुनेछ तर यदि तपाईं मेटाइएको प्रत्येक वस्तुको आधिकारिक स्रोत जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ.
KEY SIMs3फिचरहरू हटाइए
मेटाइएको शैली सिर्जना गर्नुहोस्। भविष्यको विस्तारमा यो थपिने छैन।
भवन वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै परिमार्जन छैन।
कुनै "सामान्य" पेशा छैन। चिकित्सा, व्यवसाय, कानून र अन्य हटाइयो।
कुनै खुला संसार छैन। विभिन्न ब्लकहरूका बीच स्क्रीनहरू लोड गर्दै। प्रत्येक छिमेकमा १--1 ब्लक हुन्छन्।
पौंडी पोखरीहरू छैनन्।
चित्रकला पछाडि कुनै इलाका संशोधन विकल्प छैन। पूर्ण रूपमा समतल भूभाग।
प्रगति छैन। गैर-प्रयोगकर्ता द्वारा चालित सिमहरू हुर्कने छैनन्, बच्चाहरू हुनेछन, काम गर्नेछन्, विवाह गर्नुहोस्, वा सारिनेछ।
स्टेजमा नयाँ ब्लकहरू सिर्जना गर्ने वा राख्ने कुनै सम्भावना छैन। मञ्चमा TWO voids मात्र हुनेछ।
कुनै म्याक संस्करण सुरूमा छैन।
मुख्य विशेषताहरू सिम3क्रप गरिएको / प्रतिबन्धितमा
एउटै ब्लकमा सबै भवनहरूको एक समान आधार हुनुपर्छ।
शिशुहरू केवल वस्तुहरू हुन्। सबै सम्भावित अन्तर्क्रिया क्रिबको माध्यमबाट हुन्छ। शिशुहरूका लागि कुनै वस्तुहरू छैनन्।
कोष भ्रम हो। पृष्ठभूमिमा देखिने भवनहरू खेलमा पहुँचयोग्य छैनन्।
पूर्ण रूपमा फ्ल्याट ब्लकहरू। सम्पूर्ण निर्माण योग्य संसार पूर्ण रूपमा सपाट छ।
प्रत्येक घरमा थोरै स्तरहरू / फ्लोरहरू। प्रति निर्माण तीन फ्लोरहरूमा सीमित।
Signififantant सानो संसारहरु। २ blocks ब्लक भन्दा कम जब सिम्स 25 १२3भन्दा बढी भयो।
सानो ब्लकहरू यो × 64 × from× बाट ×० × .० सम्म जान्छ।
प्रत्येक ब्लकमा लोड हुने स्क्रीनहरू छन्।
नक्सा एक फ्ल्याट छवि हो, आयाम वा गहिराई बिना।
युवाहरू वयस्कहरू र बुढेसकालमा उस्तै उचाईका छन्, साथ साथै अत्यन्त समान छन्।
अन्य एलिमेन्टहरू पहिले छुट्याइएको सामानबाट हटाइयो (LS1-LS3)
कुनै एक्ने छैन।
कुनै एनिमेटेड चलचित्र छैन।
सिम्सको आकांक्षामा कुनै त्रुटि छैन।
कुनै बच्चा छैन।
कुनै वेटर छैन।
कुनै बेसमेन्ट छैन।
कुनै किताब पसल छैन।
कुनै चोरहरू छैनन्।
कार छैन (सजावटको लागि पनि होईन)।
सफाई सीप छैन।
बिना कपडा किन्नु।
कुनै र choice्ग छनोट पा wheel् करीव २० रंगहरूमा सीमित।
"सुविधा" को आवश्यकता पर्दैन।
बहु-र ha्ग कपालमा धेरै रंगहरू छनौट गर्ने कुनै सम्भावना छैन। केवल प्रिंसिपल छनौट गरियो।
बेलुकाको खाना प्रस्ताव छैन।
कुनै मनपर्ने छैन (खाना, रंग, संगीत)।
पूर्ण मेकअप छैन।
कुनै ग्यारेज ढोका छैन।
कुनै माली भाडामा लिन छैन।
कुनै भूत होईन।
खाना भण्डार छैन।
कुनै शरीरको कपाल
कुनै समाचार पत्र छैन।
मेकअपको लागि कुनै अस्पष्टता स्लाइडर छैन।
अन्य सिम्सबाट कुनै पार्टी आमन्त्रित छैन।
कुनै निजी विद्यालय छैन।
कुनै अस्पताल, कार्यालय, स्कूल, आदि छैन।
कुनै अनियमित वा दुर्घटनात्मक मृत्यु।
कुनै अंगरक्षक छैन।
कुनै रेस्टुरेन्ट छैन।
छालाको लागि कुनै स्लाइडर छैन।
कुनै पौडी खेल्न वा पौडी खेल्ने छैन।
कुनै दुखद जोकर वा सामाजिक खरायो छैन।
कुनै सिमले काममा वा स्कूल जानको लागि कुनै मौका छैन।
कुनै राशि चिह्न छैन।
उद्देश्य प्रेषितहरूबाट हटाइयो
कुनै परिवर्तन तालिका छैन।
कुनै डिशवॉशर छैन।
कुनै क्रिब्स छैन।
कुनै बच्चा क्यारीएज छैन।
कुनै जाकूजी छैन।
कुनै पूल टेबल छैन।
कुनै रद्दी टोकरीहरू छैन।
संक्षिप्तमा, तत्वहरूको विस्तृत सूची भन्दा बढी हटाइयो वा अघिल्लो डेलिभरीहरूको सम्बन्धमा क्याप गरिएको छ जसले EA र म्याक्सिसको पक्षमा थोरै चासो हाइलाइट गर्दछ सिममा टिकट प्रिन्टि machine मेशिन राख्नु भन्दा बाहिर उपयोगकर्तालाई खुशी पार्न धेरै बहुविध विस्तारहरू गर्नु पर्ने हुन्छ। एक प्रीमियम सदस्यता थप्नुहोस् जुन यस्तो देखिन्छ कि खेलमा कुन चीजहरूमा आधारित छ। सिमसिटीका साथ दुबै स्टूडियोहरूको कामले चाहेको धेरै छोडिदियो र फ्रान्चाइजीमा स्पष्ट चरणमा भएको कुराको आलोचना वास्तवमै कठोर थियो। अब, यस्तो देखिन्छ कि सिम्स the उही बाटोमा गइरहेको छ।
म आशा गर्दछु र आशा गर्दछु कि आलोचक र श्रोता दुबै कडा हुन्छन् जस्तो कि यो काम लाई योग्य छ। Nवा पर्याप्त वजन समाचार मात्र प्रदान गरिएको छैन, तर विस्तारमा थपिएको सबै फेरि हटाइन्छ र थप रूपमा, अघिल्लो डेलिभरीहरूमा देखिएका दर्जनौं तत्त्वहरू मेटिएका छन्। सिम्स In मा हामीसँग सानो संसारहरू हुनेछन्, कम विविधताका साथ, एक अर्कोसँग जोडिएको छरछिमेकबाट पार हुन नसक्दा र सीमितताहरूको साथ पूर्ण रूपमा सपाट इलाका वा अधिकतम तीन फ्लोरको रूपमा निर्माण गर्दा। एक वास्तविक अप्ठ्यारो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » घर » भिडियो खेलहरू » सिम्स deleted मेटाइएको वस्तु सूची अप्ठ्यारोमा सीमा
ग्राहम नार्डोनले यकिन गर्दछ कि त्यहाँ अनियमित मृत्यु हुनेछ। केही कारणले गर्दा सिम्सको आधिकारिक पत्रिकाले केही गलत डाटा दिए, तर त्यो पहिले नै सुल्झाइसकेको छ।यो लेखमा अरु त्रुटिहरू छन् कि छैन मलाई थाहा छैन।
व्यक्तिगत रूपमा म पोखरी जस्ता चीजहरू छुटाउँछु, तर हामीले यो याद गर्नै पर्छ कि यो एक फरक खेल हो, त्यसैले यो समान छैन, त्यसैले उनीहरूलाई यत्तिको शाब्दिक रूपमा तुलना गर्नु हुँदैन।
यहाँ छलफल गरिएका धेरै चीजहरू प्रत्येकको पहिलो खेल तिनीहरूको विस्तार बिना नै तिनीहरूको पनि थिएन, तपाईंले केवल उनीहरूको लागि पर्खनु पर्दछ, वा के तपाईं उनीहरूलाई पहिलो खेलमा सबै चीज राख्न चाहनुहुन्छ? यस तथ्य बाहेक कि मलाई शंका छ कि यति धेरै चीजहरू हराइरहेका छन् जब विशेष वेब विश्लेषणमा उनीहरूले यसलाई एक give दिन्छन्। यो गुनासोको लागि गुनासो छ।
Cruis लाई जवाफ दिनुहोस्।